विद्युतीय उपचार पद्धति – ECT - Mental Health
यो मानव मस्तिष्कमा बिद्युत प्रवाह गरेर केहि मानसिक रोगको उपचार गरिने एक पद्धति हो । यसलाई अंग्रेजीमा Electroconvulsive Therapy भनिन्छ । बोलिचालीको भाषामा यसलाई छोटकरीमा ECT मात्र पनि भनिन्छ । विगत शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि केही कडा मानसिक रोगहरूमा यस प्रविधिको प्रयोग सुरु भएयता यो अझै पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । यस अवधिमा औषधि विज्ञानले निकै प्रगति गरेर मानसिक रोगहरूमा प्रयोग गरिने आधुनिक असरदार औषधिहरूको खोज भए तापनि ती औषधिहरूले यस प्रविधिलाई पुर्णरुपले विस्थापित गर्न सकेका छैनन् । यस प्रविधिमा मानव मस्तिष्कमा छोटो अवधिकोलागि निश्चित मात्रामा विद्युत प्रवाह गरिन्छ । यसरी प्रवाहित विद्युत मस्तिष्कभरिमा फैलिएपछि केही रसायनिक र सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तन हुन्छन् जसले केही मानसिक रोगहरूमा औषधिको भन्दा निकै चांडै सुधार आउँछ ।
ECT कसरी गरिन्छ ?
मानव मस्तिष्कमा विद्युत प्रवाह गर्न तयार पारिएको एक विशेष प्रकारको उपकरणद्वारा टाउकोको खास भागमा विद्युत प्रवाह गरिन्छ । यस प्रविधिमा मानव मस्तिष्कलाई निश्चित प्रकारले खास अवधिसम्म एकैसाथ क्रियाशील गर्न आवश्यक विद्युत मात्र प्रवाहित गरिन्छ । शुरुशुरुमा यो तरिका अपनाउंदा आवश्यक शारीरिक परीक्षणपश्चात् बिरामीलाई ओछ्यानमा उत्तानो पारेर सुताएर विद्युत प्रवाह गरिन्थ्यो । तर यसो गर्दा शरीरभरिका मांशपेशी हरु मा एकै पटक कडापन र छारेरोग झैं झट्का पनि लाग्ने हुनाले हाल यो उपचार बिरामीलाइ General Anethesia दिएर बेहोश गराएर मात्र गरिने चलन छ । अबिकशित देशहरुका कतिपय कम पूर्वाधार भएका अस्पताल मा बहोश नगराई ECT गरिने चलन अझै बिध्यमान छ ।
कस्ता रोगहरूमा या अवस्थाहरूमा ECT को प्रयोग गरिन्छ ?
डिप्रेसन बढेर व्यक्ति आत्महत्या गर्न उद्यत भएको अवस्था
डिप्रेसन या पागलपन (साइकोसिस) बढरे बिरामीले खान पिउन छोडेको अवस्था
डिप्रेसन बढेर बिरामीले बोल्ने र हिडंडुल गर्न नसक्ने अवस्था
अत्यधिक उत्तेजित पागलपनको अवस्था
विविध कारणले बिरामीलाई औषधि दिन नसकिने अवस्था
औषधिले सुधार ल्याउन नसकेको डिप्रेसन तथा साइकोसिस
माथि उल्लेखित समस्याहरूमा ECT को प्रयोगले लक्षणहरू छिटो नियन्त्रण्मा ल्याउन सकिन्छ । यी बाहेक मानसिक रोग विशेषज्ञले अन्य अवस्थाहरूमा पनि यस प्रविधिको प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्दछन ।
कति पटकसम्म ECT दिनुपर्छ ?
ECT शुरु गरेपछि अर्थात् दुइ टिन पटक पछि बिरामीमा आएको सुधार हेरेर कति पटक प्रयोग गर्ने भनेर निणर्य गरिन्छ । प्राय बिरामीहरूलार्इ चारदेखि आठ पटक दिनुपर्ने हुन्छ । तर केहि बिरामी लाइ बढी पटक दिनुपर्ने आवश्यकता पनि पदर्छ ।
यो कत्तिको सुरक्षित छ ?
ECT को प्रयोगको कारणले बिरामीको मृत्यु भएका घटनाहरू यदाकदा सुन्नमा आए पनि यो प्रविधि वास्तवमा एक सुरक्षित प्रविधि हो । अन्य बेहोस गरेर गरिने प्रविधिहरू (जस्तै बेहोस गरेर गरिने शल्यक्रियाहरु) भन्दा यसको कारणले हुने मृत्यु अत्यन्त न्यून छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थाहरूमा ECT औषधिहरू भन्दा पनि सुरक्षित मानिन्छ । गर्भावस्थाको सुरुका महिनाहरूमा औषधिको प्रयोगले बच्चालाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना हुनाले यस अवस्थामा महिलालाई कडा मानसिक रोग लागेमा कतिपय औषधि भन्दा ECT नै सुरक्षित हुन्छ । त्यस्तै औषधिका नकारात्मक असरका कारण औषधि धान्न नसक्ने वद्धृहरूलार्इ पनि कडा मानसिक रोग लागेको अवस्थामा ECT एक भरपर्दो उपाय सावित हुनसक्छ ।
यसका नकारात्मक असरहरू के हुन सक्छदन् ?
केही दिनसम्म स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनु सबैभन्दा बढी मात्रामा भेटिएको नकारात्मक असर हो । कतिपय मानिसमा चाही स्मरण शक्तिको समस्या लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ । यस बाहेक ECT को प्रकारअनुरूप मांसपेसी तथा हाड-जोर्नी दुख्न सक्छ । टाउको दुख्ने पनि हुन सक्छ । कम सम्भावना भएका अन्य नकारात्मक असरको जानकारी सम्बन्धित विज्ञसंग लिनु राम्रो हुन्छ । यो करेन्ट लगाएर सजाय दिने प्रविधि होइन ।
ECT र विवाद
हलिवुड का सिनेमा देखि लिएर विभिन्न श्रब्य दृश्य का माध्यममा मानसिक रोगि र उपचार को गलत चित्रण गरिने पुरानो परम्परा हो । कतिपय पुराना सिनेमा मा ECT को पनि गलत तरिका ले चित्रण गरिएको देखिन्छ । कतिपय अस्पताल मा ECT लाइ बेहोस नगरि सम्बेदनहिन तरिकाले गरिएको कारणपनि यो बेला बेलामा विवादमा तानिन्छ । यो एउटा उपचार कै प्रबिधि हो भनि बुझ्न अनुरोध गरिन्छ । तर अरु शल्यक्रियामा Anesthesia दिए झैँ ECT गर्दा पनि Anesthesia सहित को ECT गर्न पाउनु हरेक ECT गरिने बिरामी को हक हो ।